नक्काशी - कला प्रिंट एक प्रकारको, अन्तिम cliche देखि मुद्रण छवि। शास्त्रीय उत्कीर्णन कुनै पनि ढाँचा को रूप मा एक कटर मार्फत कटौती काठ, प्लास्टिक (लिनोलियम) वा एक्रिलिक सामाग्री देखि एक प्रिन्ट छ। यस मामला मा छापे संख्या सीमित छ। नक्काशी - एक woodcut, एक विशेष प्रविधि प्रयोग गरेर निर्मित छ जो। धातु प्लेट, तामा, इस्पात वा जस्ता - नक्काशी मुद्रण को दिल मा।
धातु थाली, billet cliché अम्लीय लागूपदार्थ प्रक्रिया। प्रयोग इस्पात लागि नाइट्रिक एसिड, Chloro reactant - तामा लागि।
उपयुक्त आकार को धातु थाली, एक चम्कने गर्न पलिश छ degreased र विशेष एसिड प्रतिरोधी लाह ढाकिएको। सुकाउने पछि, workpiece जो कुनै न कुनै हुन र पछि rework आवश्यक हुन सक्छ, patterned छ। केही अवस्थामा, छवि पूर्ण समाप्त गर्न सकिन्छ। यो सबै मास्टर को प्राथमिकताहरू मा निर्भर गर्दछ। धेरै कलाकार एक cliché को आवश्यक ठीक-मिलाउने फेला, तर केही साँचो कला सुधार गर्न आवश्यक छैन भन्ने विश्वास गर्छन्। तर, विधि महत्वपूर्ण छ, तर अन्तिम परिणाम। तयारी र सीधा मुद्रित गर्दछ को तयारी समयमा दुवै ठूलो कौशल आवश्यकता वास्तविक कला - तथापि, नक्काशी।
खाली मास्टर मा मुद्रण पछि इच्छित स्थानहरूमा एसिड प्रतिरोधी कोटिंग संग हटाउने, पातलो तेज सुई सबै रेखाहरू scratched। यसरी धातु मात्रै यो recess बनाउन आवश्यक छ ती अंक मा उपलब्ध अभिकर्मक उजागर हुन्छ। तयार proshtrihovannaya preform एसिड जोडतोडले छ, र नक्काशी प्रक्रिया सुरु हुन्छ। दबाइ संग स्नान सुरक्षित उछिट्टिएको रोक्न ढाकिएको हुनुपर्छ। यस मामला मा, यो कोठा हवादार निश्चित छ, त्यसैले हावा विषाक्त एसिड वाफ ध्यान छैन।
Etchings - कलाकार को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न केही अवस्था आवश्यकता एक जटिल प्रक्रिया हो। सुरक्षा उपाय को बेवास्ता अनुमति छैन। रासायनिक सामाग्री नक्काशी लागि धातु workpieces को मशीनिंग प्रयोग गरिन्छ, खतरनाक पर्याप्त छन् मानव शरीर मा आफ्नो नकारात्मक प्रभाव पूर्ण निष्प्रभावी हुनुपर्छ, वा कम से कम न्यून पारिएको। समाप्त प्याड नक्काशी पछि चलिरहेको पानी मा धोए, र यो रंग अवशेष scraping थियो।
अर्को, सब्सट्रेट सम्पूर्ण recess भरिन्छ कि मसी लागू गरिएको छ। अतिरिक्त मसी tampon को सतह हटाइएको छ। त्यसपछि नक्काशी बोर्ड प्रिंट थिचेर छन्। कागज दबाब छाप को आधार गर्न तेज र विपरीत थिचिएको छ गर्दछ। तसर्थ, नक्काशी प्रविधी तपाईं कुनै पनि जटिलता को रेखाचित्र सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ; Thinnest लाइनहरु, कर्ल, डट्स र खरोंच एकदम organically हेर्न। दसौं र सयौं प्रिंट संख्या, को cliché बिस्तारै मिट र विपरीत अनुपलब्ध छ भने। यस मामला मा फेरि लाह, र रेखाचित्र बढाउन गर्न एसिड-नक्काशी यसलाई कवर, समय समयमा बोर्ड अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ।
धातु प्लेट फेरि नुनीन बनान प्रक्रिया भूत, अझै पनि समय को एक नम्बर प्रयोग गर्न सकिन्छ, उचित प्रक्रिया। प्रत्येक प्लेट भएको नक्काशी प्रिंट गरे जो मुद्रण प्लेट छ। प्रायजसो, यो कलात्मक चित्र। उत्कीर्णन नक्काशी कला सबैभन्दा रोचक प्रकारका एक मानिन्छ। यो प्रारम्भिक 16 औं शताब्दीमा विकसित भएको थियो।
1515 मा नक्काशी को प्रविधी गरिएका प्रसिद्ध चित्रकार अल्ब्रेक्ट Dürer, आफ्नो बोर्डहरू धातु नक्काशी प्रयोग ठीक उत्कीर्णन कला को एक युग को शुरुवात थिए। Dürer क्लासिक नक्काशी etchings सिर्जना संयुक्त, यी दुई प्रविधी लामो आफ्नो काम मा एक बराबर मूल्य छन्।
इटालियन चित्रकार Parmigianino, etchings को मास्टर नायाब साँचो कला को श्रेणीका तिनीहरूलाई उठायो। पछि, डच चित्रकार रेम्ब्रान्टका प्रकाश र छाया को एक अद्वितीय प्ले को तस्बिरहरू बनेको, साथै, उहाँले अभूतपूर्व tread गहिराई दिनुभयो जो पुन नक्काशी, अभ्यास गर्न थाले।
1765 मा, फ्रान्सेली चित्रकार जीन-Baptiste Leprens धेरै नरम टन, केदारनाथ को reminiscent उत्पादन लागि नयाँ प्रविधी खोज। प्रविधिलाई "aquatint" भनिन्छ। पहिलो छवि tracings विधि nakalyvaniya त्यसपछि ढाकिएको प्याड बाट हस्तान्तरण मा गाढा स्थानहरू rosin आकृति etched लागि। बोर्ड गरम, को पाउडर पग्लियो र दानेदार पत्र को सतह ढाकिएको। उज्ज्वल क्षेत्रमा सामान्य तरिकाले प्रशोधन थिए। Aquatint अक्सर प्रयोग रंग मुद्रण संग संयोजन मा, यो प्रविधी को विगतको मास्टर फ्रान्सिस्को Goya, इतिहास मा सबै भन्दा राम्रो-Etchers कलाकारहरूको एक मानिन्छ।
को नक्काशी देखि - एक सूक्ष्म कला, आफूलाई एक कठिन विधा मा प्रमाणित गर्न प्रयास गर्ने 16-18th शताब्दीयौंदेखि को सबै भन्दा राम्रो कलाकार हो। तर, सफलता मात्र सबैभन्दा प्रतिभाशाली सँगसँगै थियो। प्रारम्भिक 17 औं सताब्दी नक्काशी को सबै भन्दा प्रसिद्ध मालिकको को एक एक फ्रान्सेली कलाकार Zhak Kallo थियो। कलाकार तीतो यथार्थवाद शैलीमा काम, आफ्नो सबै भन्दा प्रसिद्ध काम "युद्ध को भयानक" को एक श्रृंखला को भाग र नक्काशी भनिन्छ को सबै भन्दा सुवक्ता मास्टर हो "हंग।"
नक्काशी को प्रकार
को 17 औं सताब्दी उत्कीर्णन प्रविधी मा सफलतापूर्वक iconography प्रयोग गरिएको। चित्रकला को फ्लेमिश स्कूल को प्रतिनिधि, कलाकार एंथनी भ्यान Deyk, राम्रो etcher भयो पवित्र तथ्याङ्कले अभ्यास। नक्काशी कला प्रतिष्ठित तस्बिरहरू सबैभन्दा सूक्ष्म nuances कब्जा गर्न अनुमति दिन्छ।
अर्को प्रकार तथाकथित प्रजनन नक्काशी थियो। यो प्रकाशक अपनाए थियो। को 18 औं शताब्दीको दोस्रो आधा समयमा प्रकाशित पुस्तकहरू मा दृष्टान्तहरू को लगभग सबै, यो नक्काशी को प्रविधी मा गरिएको थियो। यो चित्र शैली सबै भन्दा राम्रो साहित्यिक काम लागि उपयुक्त छ। चित्रा रंगीन प्राप्त र राम्रो कथा को सार बित्यो। प्राविधिक नक्काशी तालिका उपलब्ध अपेक्षाकृत साथ प्राप्त गर्न सस्तो थियो, र छवि गुणस्तर एक उच्च स्तर मा रहनेछ।
Mezzotint - सबैभन्दा समय-खपत को प्रकारको, तर धेरै प्रभावकारी। यसलाई कारण पनि cliché को सतह "graining" गर्न टन प्रयोग आधारित छ। सानो recesses मुद्रण छाया गर्न प्रकाश देखि चिल्लो संक्रमण प्रदान गर्दछ खुरदरापन दिनुहोस्। mezzotint फरक मखमली richness र रंग को तरिका बनेको Etchings।
को "मूल" हेर्नुहोस् - अत्यधिक कलात्मक तस्बिरहरू मात्र सबै भन्दा प्रसिद्ध मालिकको द्वारा गरिएको छ कि। धेरै कलाकार को लागि, नक्काशी तिनीहरूले पूर्णतया आफ्नो रचनात्मक आकांक्षाओं महसुस गर्न सक्षम छन् जो मार्फत आउटलेट एक प्रकारको, भएको छ। को 18 औं शताब्दीको सबैभन्दा उल्लेखनीय मुद्राकार इटालियन architect Giovanni Piranesi, रोमन को धेरै तस्बिरहरू एक लेखक मानिन्छ cityscapes र प्राचीन। समय को कुनै कम प्रसिद्ध कलाकार etcher Giovanni Battista Tiepolo ,, फ्रान्सिस्को Goya, Antuan Vatto, Canaletto, Fransua Bushe थिए।
नक्काशी को कला जीर्णता मा गिर को 19 औं शताब्दीमा, यो एक रंगीन तरिका मुद्रण प्रविधिहरू को उपस्थिति को प्रभाव अन्तर्गत भयो। तर, शताब्दीमा कलाकारहरूको engravers को अन्त मा हाल दोहोऱ्याइएका। नयाँ etchings अब पुस्तक संस्करणमा एउटा दृष्टान्त तिनीहरूले कला पूर्ण-fledged काम गर्दछ, चार्ट मा कलात्मक रुझान भएका छन् रूपमा देखेको थिए। प्रारम्भिक 20 औं शताब्दीमा, तिनीहरूले यस्तो चार्ल्स-Fransua Dobini, धेरै फ्रान्सेली चित्रकारों द्वारा नजिक थिए Kamil Koro र अरूलाई। उहाँले नक्काशी र पेरिसियन इंप्रेशनिस्ट चित्रकार को प्रविधी मा विशेष Edouard Manet। प्रविधी उत्कीर्णन रूसी कलाकार बीच वैलेन्टिन Serov र इवान Shishkin महारत। अधिक नक्काशी काम एडल्फ Mentsel जर्मनी मा Anders Zorn - अमेरिकी etcher Dzheyms Uistler, स्विडिश थियो।
कसरी स्क्राच देखि एक पेन्सिल आकर्षित गर्न कसरी सिक्न?
मास्टर कक्षाहरू: Toon आकर्षित गर्न कसरी
Sergey Golitsyn। "चालीस के prospectors" - एक कहानी वा उपन्यास?
Faun - गोठालाहरू र किसान को एक संरक्षक
Duphaston, दबाइ बारेमा समीक्षा आफ्नो स्कोप
आधुनिक जीवन स्मृति हानि को गति अनुमति गर्नुपर्छ